Ra'isal Wasaaraha Ingiriiska oo xisbigeedu doonayo in codka kalsoonida loo qaado - BBC News Somali
Micheal Gove ayaa sheegay in uu kalsooni "buuxda" ku qabo May, waxaanu xaqiijiyey in aanu yeeli doonin sida dhawr wasiir oo hore iska casili dooni xukuumadeeda.
Liam Fox oo isna ka tirsan xukuumadda May, ayaa xildhibaannada [xisbigeeda] ee baarlamanka ku boorriyey in ay taageeraan qorshaha heshiiska ka bixitaanka Midowga Yurub ee Ra'isal wasaaraha, waxaanu yidhi "heshiiska haatan la soo badhigay wuxu dhaamaa heshiis la'aan".
Is casilaadii Dominic Raab ka dib, waxa ay Ra'isal Wasaaruhu wasiirkeeda wada xaajoodka ka bixitaanka Midowga Yurub u magacawday wasiirkii caafimaadka Steve Barclay.
Isku shaandhaynta kooban ee ay Ra'isal Wasaaruhu samaysay waxa kale oo ay ku magacawday Amber Rudd oo haatan noqon doonta wasiirka shaqada iyo daryeelka hawlgabka, waxaana xilkaa iska casishay Esther McVey Khamiistii.
BBC-da ayaa ogaatay in gudoomiyaha xildhibaannada xisbiga ugu jira baarlamanku ay suurto gal tahay in uu qabto shir ay iskugu iman doonaan wasiirada taageersan ka bixitaanka Midowga Yurub hase yeeshee heshiiska ay Ra'isal Wasaaruhu doonayso in ay saxeexdo ka webaya.
Rai'sul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku dhawaaqday qorshahan cusub ee ay ansixiyeen golaha wasiirada.
Rai'sul wasaaraha Britain Theresa May ayaa inta ku dartay in heshiskan uu difaacayo shaqooyiinka,ammaanka iyo sharafta dastuurka UK islamarkana uu dib u soo celinayo in Britain ay kontaroosho sharciyadeed iyo xudduudaheeda.
Waxay xustay in go'aankan uu yahay khiyaar adag gaar ahaan marka ay timado arrinta xuduuda waqooyiga Ireland.
Madaxa gudiga baarlamaanka Yurub u qaabilsan ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub Guy Verhofstadt ayaa sheegay in heshiiskan "uu suragal ka dhigayo ka bixitaan UK ee Midowga Yurub.
Ra'sul wasaaraha ayaa cadaadis adag oo ku saabsan heshiiska kala kulmaysa mucaaradka.